Miramistin - torolàlana ho an'ny bevohoka amin'ny tendany
dia manondro fanafody antiseptika izay mahomby amin'ny bakteria maro, holatra. Izany no antony ilàna azy matetika amin'ny fitsaboana, ny dindon-pahavoazana. Diniho ny zava-mahadomelina amin'ny antsipirihany ary fantarao raha azo atao ny mampiasa vehivavy bevohoka hanehoana ny tenda Miramistin, amin'izay tranga sy ny fomba ampiasàna azy tsara.
Azonao atao ve ny mamafy Miramistin eo amin'ny tendany amin'ny vehivavy bevohoka?
Noho ny fisian'ny fanafody famonoana zava-mahadomelina any an-toerana ary tsy miditra amin'ny sisim-paosy, dia ampiasaina mandritra ny fitondrana ny zava-mahadomelina. Ny fikarohana nataon'ireo andrim-panjakana tandrefana dia nanohitra ny mety ho vokatry ny teratogenic eo amin'ny foetus. Vokatr'izany, matetika no ampiasaina amin'ny zava-mahadomelina ny zava-mahadomelina.
Na izany aza, matetika ny tovovavy mpitsabo, noho ny antony fiarovana, dia tsy manoro ny fampiasana ny zava-mahadomelina amin'ny fohy, hatramin'ny 14 herinandro ny fitondrana.
Ahoana ny fomba tsara handroanana ny tenda amin'ny miramistinina mandritra ny fitondrana vohoka?
Tsara homarihina fa ny fitsaboana dia tsy azo ampiasaina amin'ny fitondrana aretina amin'ny taova ENT, fa koa amin'ny fitsaboana ny hoditra ao pyoderma, aretin'ny fivalon'ny mitefon'ny moka.
Araka ny torolalana, ny Miramistin amin'ny fitsaboana mandritra ny fitondrana vohoka dia azo ampiasaina hatramin'ny in-6 isan'andro. Ny fitsaboana dia 5-7 andro. Na izany aza, ny tsirairay dia ny tsirairay. Noho izany, ny vehivavy dia tsy maintsy manaraka ny fitsaboana ara-pitsaboana, manatanteraka azy ireo amin'ny fomba tsotra.
Ny ankabeazan'ny fifanoherana sy ny, angamba, ny hany tokana dia ny tsy fandeferana ny singa ao amin'ny zava-mahadomelina, ny fampivoarana ny tsy fahampian-tsakafo. Amin'ity tranga ity dia tapaka ny fampiasana azy.
Tsara ny manamarika fa misy ny fiantraikany amin'ny fampiasana ny zava-mahadomelina. Anisan'izany ny fandorana ny tendany, izay mandalo ao anatin'ny fotoana fohy.
Araka izany, araka ny hita amin'ny lahatsoratra, amin'ny alahelona amin'ny tenda mandritra ny fitondrana vohoka Miramistin dia azo ampiasaina amin'ny 1 trimès. Na dia izany aza dia tena zava-dehibe ny hahazoana torohevitra momba ny fitsaboana amin'ity kaonty ity, aza mampiasa ny zava-mahadomelina.
Sanorin amin'ny fahantrana
Ny oksizenina noana ny foetus
Famantarana ny fitondrana vohoka amin'ny herinandro 16
Ny toaka amin'ny herinandro voalohan'ny vohoka
Firaisana mandritra ny fitondrana vohoka - fihetsika
Na azo atao ve ny hematogen amin'ny bevohoka?
Fetisy amin'ny herinandro faha-14 amin'ny bevohoka
Lizards ao an-trano
Marika momba ny fiakaran'I Maria Virjiny Masina tamin'ny 28 Aogositra
Marinade ho an'ny zanak'ondry
Horonan-tsary an-trano an-trano
Oria avy any an-dranomasina
Sakafo pea miaraka amin'ny sausage mifoka sigara
Mpivarotra akoho miverina
Katsaka ao amin'ny efitra fandroana
Ny volon'ireo felam-baton'ny lehilahy - ireo modely tsara indrindra amin'ny hoditra voajanahary sy artifisialy
Fampandrenesana ny fandehanana fanadinana
Inona no karazana voankazo azo ampiasaina amin'ny pancreatitis?
Ahoana no hikarakarana ny puppy Chihuahua?
Akanjo avy amin'ny lobolin'ny lehilahy
I Irina Sheik dia nandrehitra ny peratra fanoherana tao amin'ny Wedding Fashion Week
Parodontose - fitsaboana ny dingana rehetra sy ny fomba rehetra hisorohana ny aretina